Faah Faahino ka soo Baxaya Dagaal u Dhaxeeya Xoolo Dhaqato Ka soo Jeeda Deegaanada Puntland iyo Galmudug (VIDEO) - Hablaha Media Network
Faah Faahino ka soo Baxaya Dagaal u Dhaxeeya Xoolo Dhaqato Ka soo Jeeda Deegaanada Puntland iyo Galmudug (VIDEO)
HMN:- Waxaa Faah-faahino kala duwan ay kasoo baxayaan dagaal khasaare geystay oo shalay ilaa xalay ka dhacay deegaano dhowr ah oo ku yaalla bariga gobolka Mudug.
Dagaalkan ayaa la sheegaya inuu u dhaxeeyay xoolo dhaqato kasoo kala jeeda deegaanada Puntland iyo Galmudug, inta la xaqiijiyayna 4 ruux ayaa ku dhimatay dagaalka ka dhacay Bariga gobolka Mudug.
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa midba mid kale ku eedeeyay in uu hurinaayo dagaalka ka dhacay Bariga gobolka Mudug.
Xaalada deegaanadii lagu dagaalamay ayaa saakay waxaa ka taaganaa xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba Maleeshiyo iyadoo mid waliba uu u yeertay gawaarida gaashaaman ee ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland.
Magaalada Gaalkacyo ayaa iyadana waxaa laga dareemayaa xiisad colaadeed, waxaana laga cabsi qabaa in uu halkaasi dagaal ka qarxo, Xaaladda Magaalada gaalkacyo ayaa maalmihii u danbeeyay ahayd mid kacsan.